ओली अस्पताल भर्ना हुनै लाग्दा मोदीले गरे यस्तो भावुक ट्वीट, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल — Sanchar Kendra
ओली अस्पताल भर्ना हुनै लाग्दा मोदीले गरे यस्तो भावुक ट्वीट, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज अस्पताल भर्ना हुँदैछन् । दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि उनी आजै अस्पताल भर्ना हुन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रत्यारोपणका लागि भर्ना हुन सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दक्षिणी छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिएपछि उनको ट्वीट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकाे छ। प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण राजधानीस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बुधबार हुने भएको छ । अस्पतालमा हरेक बुधबार नियमित मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने गर्छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोमबार अस्पतालमा भर्ना गरिनेछ,’ शिक्षण अस्पतालका युरोलजी तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण शल्यक्रिया विभागका प्रा.डा.प्रेमराज ज्ञवालीले भने । प्रत्यारोपणका लागि डा. ज्ञवालीकै नेतृत्वमा शल्यक्रिया गर्ने तयारी छ । प्रत्यारोपण गर्ने व्यक्तिलाई ‘एन्टी रिजेक्सन’ औषधि आदि दिनुका साथै विभिन्न तयारीका लागि करिब दुई दिनअघि नै अस्पताल भर्ना गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालका विशेषज्ञहरूको सोमबार विशेष बैठक हुने एक चिकित्सकले बताए । प्रत्यारोपणकै तयारीका सिलसिलामा आइतबार बिहान ग्रान्डी हस्पिटलमा ओलीको ‘कोलोनोस्कोपी’ गरिएको थियो । गत शनिबार शिक्षण अस्पतालमा प्रत्यारोपण अगाडि आवश्यक पर्ने रगतलगायत विभिन्न परीक्षणहरू गरिएको थियो । १२ दिनअघि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा ओलीको एन्जियोग्राफी गरिएको थियो । १९ दिनअघि ग्रान्डीमै ‘बोन डेन्सिटी (हाडको घनत्व परीक्षण) र ‘सिटिस्क्यान’ गरिएको थियो ।
सबै कुरा सामान्य रूपले हुँदै गए मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई करिब ५ दिन अस्पतालमा राख्ने तयारी छ । कुनै जटिल स्थिति नहुँदा शिक्षण अस्पतालबाट सामान्यतया ४–५ दिनमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीहरूलाई डिस्चार्ज गरिन्छ । विशेष परिस्थितिमा प्रत्यारोपण डेढ महिनासम्म बस्नुपरेको इतिहास छ ।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदा अन्य सर्वसाधारणको सेवा प्रभावित नहुने गरी व्यवस्था मिलाइने अस्पतालले जनाएको छ । ‘सुरक्षा व्यवस्था कडा हुँदा अन्य बिरामी र आफन्तलाई हिँडडुल गर्न असहज जस्तो लाग्ला,’ अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. प्रेम खड्काले भने, ‘तर यसले आम व्यक्तिले पाउने स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुँदैन ।’
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि दातालाई अस्पतालबाट सामान्यतः चौथो वा पाँचौं दिन डिस्चार्ज गरिन्छ भने ग्रहणकर्तालाई एक साता जति लाग्ने गरेको डा.खड्काले बताए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १२ वर्षदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ । यहाँ हालसम्म ६ सय जनाभन्दा बढीको प्रत्यारोपण भइसकेको छ । आठ जनाको दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गरिएको छ । शिक्षण अस्पतालमै प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने त्यहाँका चिकित्साकर्मीलाई आइतबार दिउँसोसम्म थाहा थिएन । आइतबार नेकपा पार्टी सचिवालयको बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएपछि मात्र उनीहरूले थाहा पाए ।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा विदेशी शल्यचिकित्सकको सहयोग लिने/नलिने भन्नेबारे खुलाइएको छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आइतबारसम्म कुनै विदेशी चिकित्सकले नेपालमा प्रत्यारोपण गर्नका लागि अस्थायी अनुमति मागेका छैनन् । कसले दिदैछ ओलीलाई मृगौला ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दिने ३२ वर्षीया ती महिला झापाकी हुन् । नातामा उनी ओलीकी ‘भान्जी’ पर्छिन् । नयाँदिल्लीको इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा लगभग १३ वर्षअघि प्रत्यारोपित मिर्गौलालाई शरीरले अस्वीकार गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली नयाँ प्रत्यारोपण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसपछि सम्भावित दाता खोज्न थालिएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको ससुरालीतर्फबाट नाता पर्ने एकजना र घरतर्फबाट नाता पर्ने अर्को गरी दुई महिलाको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो  ।
ससुरालीतर्फ नाता पर्ने ललितपुरकी महिला ५० वर्ष उमेर कटेकी र उनको मिर्गौलामा पनि केही समस्या देखिएकाले घरतर्फबाट नाता पर्ने झापाकी महिलाबाट मिर्गौला लिने निष्कर्षमा चिकित्सकहरू पुगेका हुन् । झापा, चारआलीकी ३२ वर्षीया ती महिला पहिले ओलीलाई मिर्गौला दिने अन्जान घिमिरेकी भान्जी हुन् । त्यस हिसाबले उनी प्रधानमन्त्रीकी पनि ‘भान्जी’ नाता पर्ने पारिवारिक स्रोतहरूको भनाइ छ । अन्जान प्रधानमन्त्री ओलीकी भाइबुहारी हुन् । ओलीका भाइ तारा ओलीकी श्रीमती उनी राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत छिन् ।
दाता महिलाको गतसाता नै सबै शारीरिक परीक्षणहरू सकिएको छ। उनको र प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था प्रत्यारोपणका लागि अनुकूल रहेकाले चिकित्सक टोली बुधबारै प्रत्यारोपण गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । चिकित्सकहरू गत मंसिर अन्तिमतिर नै प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारीमा जुटेका थिए । तर एपेन्डिसाइटिस र पेरिटोनाइटिसको समस्याका कारण आकस्मिक रूपमा ल्यापरोटोमी नै गर्नुपरेपछि प्रत्यारोपणको मिति धकेलिएर अहिले आइपुगेको हो ।
यसबीचमा ओलीको प्रत्येक साता नियमित डायलसिस गर्ने गरिएको थियो । डायलसिस गर्दै ओली आफ्नो नियमित काममा जुटिरहेका थिए । डायलसिस र नियमित परीक्षणका लागि ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल गइरहन्थे । त्यस क्रममा उनले अहिलेकै अवस्थामा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरे सफल हुने सम्भावना कति रहन्छ भनेर सोधिरहने गरेको स्रोतले बतायो ।
डाक्टरहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै ओलीलेआफ्ना निकटस्थहरूलाई ‘अहिलेकै स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा सफल हुने सम्भावना ९८ प्रतिशत रहेको’ बताउँथे । चिकित्सकहरूको यही सल्लाहका कारण ओली प्रत्यारोपण गर्न निश्चिन्त बनेका हुन् । उनले प्रत्यारोपण गर्नमा कुनै जटिलता नरहेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै पनि भन्दै आएकाछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान नेकपाको सचिवालय बैठकमा बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए । २० मिनेट चलेको सचिवालय बैठकमा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यस्थिति र प्रत्यारोपण योजनाबारे सुनाएका थिए ।
सचिवालय बैठक बस्नुअघि पनि ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका थिए । बैठकमा ओलीले आफ्नो शल्यक्रिया त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हुने र त्यसका लागि आवश्यक तयारीका सबै काम पूरा भएको जानकारी गराएका थिए । बैठक बस्नुअघि ओलीले नेकपाका केही नेताहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए ।
छलफलमा पनि उनले आफ्नो उपचारबारे कुराकानी गरेको ती नेताहरूले बताए । ‘अब म मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न जान्छु,’ ती भेटहरूमा ओलीले भने, ‘जनताको शुभकामना र आशीर्वाद छ, पाँचौं दिनमा निको भइहाल्छु, चिन्ता नगर्नुस् ।’
साँझ उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखे । त्यहाँ मन्त्रीहरूलाई आफूले ‘भान्जी’ बाट मिर्गौला लिएर प्रत्यारोपण गर्न लागेको जानकारी दिए । सचिवालय बैठकपछि ओली दिनभर अनौपचारिक भेटघाट र छलफलमा व्यस्त रहे । आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग आगामी दिनमा गर्नैपर्ने कामहरूबारे रिपोर्टिङ लिए र आवश्यक निर्देशन दिए । सामान्यतः सोमबार बोलाइने मन्त्रिपरिषद् बैठक उनले आइतबार नै बोलाए ।
५ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साढे ६ बजेमात्रै सुरु भएको थियो । त्यसअघि उनले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसँग अनौपचारिक छलफल गरे । ‘अरू बेला मन्त्रीहरूले कुरिरहनुहुन्थ्यो, उहाँ आउनुहुन्थ्यो अनि बैठक सुरु भइहाल्थ्यो,’ आइतबारको बैठकबारे एक मन्त्रीले भने, ‘आज भने खाजाको पनि व्यवस्था थियो । हामीले झन्डै डेढ घण्टा उहाँसँग अनौपचारिक छलफल गर्‍यौं । स्वास्थ्यलाभको कामना गर्‍यौं ।’
त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको ताजा विवरण मात्रै सुनाए । ‘आज अरू धेरै विषयमा खास छलफल भएन,’ बैठकपछि एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार ओलीले १३ वर्षअघि भारतको अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका डाक्टर आउने सम्भावना रहेको बताएका थिए । ‘बिहान पनि हस्पिटल गएर चेक गरेर आएँ, डाक्टरहरूले राम्रो हुन्छ भनेका छन्, रेस्टपछि आठ/नौ दिनमा काममा फर्किन्छु,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘पहिले अपोलोमा जसले प्रत्यारोपण गरेका थिए, ती डाक्टर पनि आउने सम्भावना छ ।’
अंगदानको प्रावधान के छ ?
नेपालको कानुनअनुसार आफ्नो नजिकको नातेदारबाट सहमतिमा अंगदान लिन सकिन्छ । मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ अनुसार अंगदान गर्न मिल्ने विभिन्न ५५ किसिमका नातामा भान्जाभान्जीपनि पर्छन् ।
ऐनअनुसार ओलीले पहिलो पटक पनि आफ्नै नातेदारबाट मिर्गौला लिएका थिए । अहिले पनि नातेदारभित्रकै व्यक्तिबाट प्रत्यारोपण गराउन लागेका हुन् । ओलीको मिर्गौला बिग्रिएपछि अन्जानले मिर्गौला दिन आफैं जोडबल गरेकी थिइन् । केही महिनाअघि उनले भनेकी थिइन्, ‘सक्दो छिटो जेठाजुलाई बचाउनुपर्छ भन्ने लागेकाले मैले मिर्गौला दिएकी थिएँ ।’ अहिले पनि परिवारकै सदस्य ओलीका लागि दाता बनेकी छन् । तर व्यक्तिगत गोपनीयताका कारण उनको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।